Wargeysyada Israel oo xaqiijiyey warkii Caasimada Online: Xasan Sheekh oo la kulmay Netanyahu - Caasimada Online
Home Warar Wargeysyada Israel oo xaqiijiyey warkii Caasimada Online: Xasan Sheekh oo la kulmay...
Wargeysyada Israel oo xaqiijiyey warkii Caasimada Online: Xasan Sheekh oo la kulmay Netanyahu
Muqdisho (Caasimada Online) – War qoraal ah oo kusoo baxay Wargeyska The Times of Israel, ayaa waxaa lagu sheegay in kulan khaas ah uu dhex maray Madaxweynaha Somalia Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra’isul wasaaraha dalka Israel Binjamin Netanyahu.
Caasimada Online ayaa ahayd warbaahintii ugu horreysay ee shaacisay kulanka Xasan Sheekh iyo Netanyahu iyo socdaalkii qarsoodiga ahaa uu Xasan ku tagay magaalada Tel-Aviv. Halkan ka aqri warkii aan qornay 21-ka June 2016.
Wargeyska ayaa sheegay in kulanka labada Mas’uul uu ahaa mid khaas ah oo ay uga arrinsanayeen arrimaha Somalia kaasi oo aan la shaacin waxyaabihii kasoo baxay.
Wargeyska Times of Israel waxa uu sidoo kale xusay in Caasimada Online ay ahayd warbaahintii ugu horreysay ee warkan qortay laba toddobaad kahor.
Si kastaba, wargeyska Times of Israel waxa uu sheegay in ilo-wareedyo gaar u ah ayaga ay ka xaqiijiyeen warkan.
Wargeyska waxa uu qoray in kulanka labada Mas’uul uu ahaa kii ugu horeeyay, waxa uuna Wargeysku qoray in xogta kulanka labada Mas’uul ay lawadaagen ilo ku dhow dhow Madaxweynaha Somalia.
Qoraalka Wargeyska The Times of Israel waxaa sidoo kale lagu qeexay in kulanka labada Mas’uul uu cadeeyay Sarkaal Sare oo ku dhow Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud balse Sarkaalka ma sheegin in kulankaasi uu ka dhacay magaalada madaxda Israel ee Tel Aviv iyo in kale.
Halkan ka aqri warbixinta The Times of Israel ama hoos ka aqri ayada oo English ah.